KGS oo Ciidamo u dirtay Leego | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta KGS oo Ciidamo u dirtay Leego
KGS oo Ciidamo u dirtay Leego
Wasiir ku xigeenka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed C/risaaq Cabdi ayaa ka warbixiyay Howlgal Ciidanka Dowladda, kuwa Koonfur Galbeed ka fuliyeen degaano ka tirsan Baay in ay suurtagashay in la soo daayo Maxaabiis u xirneyd Shabaab.
Wuxuu sheegay Howlgalkan oo si gaar ah uga dhacay degaanka Kurtun oo 45-KM ujira magaalada Baydhabo in ay sahashay in la soo daayo Maxaabiis, sidoo kalena Ciidamada ay gacanta ku dhigaan Gawaari Shabaab ay lahaayeen
Dhanka kale Wasiir ku xigeenka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed C/risaaq Cabdi ayaa sheegay Ciidamo ka baxay magaalada Baydhabo in ay ku wajahan yihiin degaanka Leego oo ay maamulaan Shabaab.
Wuxuu sheegay Wasiir ku xigeenka Ciidankan marka ay tagaan Gobolka Shabeellaha Hoose in qorshaha uu yahay in dagaal adag ay la galaan ururka Al-shabaab ee gacanta ku haya degaanka Leego.
Ururka Al-shabaab ayaa bishii August 2017 waxa ay la wareegeen gacan ku heynta degaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii ay ka baxeen Ciidamo ka tirsan Midowga Afrika ee AMISOM oo degaankaasi ku sugnaaa.
Degaankankan ayaa ah meel istiraatiiji ah marka la eego isku xirka magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana go’ay xiriirka ka dhaxeeya labadaasi magaalada marka loo eego Gaadiidka Ciidanka ee wadadaasi ku socdaali jiray, inkastoo Gaadiidka dadka rayidka ah ay si caadi ah u isticmaalaan.